DFS oo Caalamka ka dalbatay in laga taageero la-dagaalanka Al-Shabaab – XAMAR POST
Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska JFS, Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, oo ku hadlaya magaca Madaxwaynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, kan Raysal Wasaaraha iyo xukuumadda, wuxuu ammaan, bogaadin iyo mahad balaaran u soo jeedinayaa saraakiisha iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya (SNA) Guulaha ay ka soo hooyeen hawlgaladii ugu dambeeyey ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab,kuwaas oo isugu jjiray la wareegitaankii deegaannada Bariire, Sabiid, Caanoole iyo Awdheegle.
Hoos Ka Akhriso War-Saxaafadeekd Wasiirka Warfaafinta oo dhowr qodob ka kooban.
1: Adkeynta iyo xasilinta degaanada laga saaray Al-Shabaab taasoo kor u qaaday kalsoonida shacabku ku qabaan ciidamada qalabka sida.
2: Soocelinta adeegyadii bulshada, sida waxbarashadii, masaajidyadii, caafimaadkii, nalalkii, biyihii iyo gargaarkii bini’aadnimo.
Dhamaan arrimahan kor ku xusan, waxay cadeynayaan kartida iyo awoodda ciidamada SNA u leeyihiin in ay ka adkaadaan kooxaha loogu yeeri argagixisada ah, isla markaan aay ogaadeen inaanay qabsan karin saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidanka SNA tiro kasto oo ay ku soo weeraraan sidii hore u dhacday dhowr jeer.
Sidii muddo badanba Dowladda Soomaaliya ay dalbanaysay, waxaan mar kale ku celinaynaa codsigeena ahaa in beesha caalamku siiso ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya tababarka iyo taageerada ay u baahan yihiin si ay Soomaaliya u nabadeeyaan, ugana saarno Al-Shabaab.
shacbiga Soomaaliyeed, Shucuubta dowladaha dariska ah iyo kuwa caalamkuba, ugu noolaadaan geeska Afrika si nabad iyo barwaaqo.
Dowladda Soomaaliya, waxay u mahadcelinaysaa dowladaha naga taageera Amniga iyo dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya sida USA, Turkey, UK, EU, African Union Iyo kuwa kale.